लुकाउनै नसकिने व्यथा - स्वास्थ्य - प्रकाशितः चैत्र ६, २०७७ - नारी
लुकाउनै नसकिने व्यथा
महिलालाई प्रसूति हुने क्रममा लामो समयसम्म सुत्केरी व्यथा लाग्यो भने भ्रूणको टाउकोले आमाको योनिमार्ग र पिसाबथैली वा मलाशयलाई लगातार च्यापेर वा थिचेर प्वाल पार्दा पिसाब बगिरहन्छ । यसरी बन्ने प्वाललाई प्रसव वा सुत्केरी फिस्टुला भनिन्छ ।
चैत्र ६, २०७७महिलालाई प्रसूति हुने क्रममा लामो समयसम्म सुत्केरी व्यथा लाग्यो भने भ्रूणको टाउकोले आमाको योनिमार्ग र पिसाबथैली वा मलाशयलाई लगातार च्यापेर वा थिचेर प्वाल पार्दा पिसाब बगिरहन्छ । यसरी बन्ने प्वाललाई प्रसव वा सुत्केरी फिस्टुला भनिन्छ ।
केही वर्षअघि काठमाडौंको मोडेल अस्पतालमा फिस्टुलासम्बन्धी छलफल हुँदा धादिङकी एक महिलाले भनेकी थिइन्, ‘मलाई ०६४ मा लामो व्यथा लागेर सन्तान भयो । तर, केही समयपछि मेरो शरीरबाट दिसा र पिसाब आफै निस्किन थाल्यो । काठमाडौं आएर देखाउँदा पनि ठीक भएन । मलाई त ठीक भएन भन्दा डाक्टरले यहाँभन्दा बढी गर्न सकिन्न । तपाईंको भाग्य नै यस्तै हो भनेको सुनेर मलाई मर्नै मन लाग्यो । तर, मोडेल अस्पतालमा सित्तैमा यो रोगको उपचार हुन्छ भनेपछि म आएँ र उपचार पनि भयो । मलाई त जिन्दगी यसरी सुकिलो भएर बाँच्न पाइएलाजस्तो पनि लागेको थिएन । अर्को जिन्दगी पाएजस्तो लाग्यो ।’
यसैगरी, पाँच वर्षअघि एउटा स्वास्थ्य शिविरमा जाँदा फिस्टुलाको उपचार गराएकी एउटी महिलासँग भेट भएको थियो । उनको छैटौं बच्चा हुने क्रममा अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्दा पाठेघर फुटेर बच्चा मरिसकेको रहेछ । त्यसपछि आमालाई पिसाब चुहिने समस्या सुरु भयो । उनले भनेकी थिइन्, ‘मलाई त पहिले धेरैले यो त रक्सी खाएर आँगनमा पिसाब फेरेर गन्हाएकी हो भन्थे । यो सुनेर म धेरै रुन्थें । पिसाब नहोस् भनेर म पानी कम पिउँथें । सात वर्षसम्म पीडा भोगेपछि बल्ल उपचार भयो । अहिले त पिसाब बग्ने धेरै कम भएको छ ।’ फिस्टुलाको व्यथा सहेका महिलाहरूका यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । धरानमा कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.मोहनचन्द्र रेग्मीका अनुसार पिसाब चुहिरहने समस्या भएर उपचार नभएका महिलाहरू नेपालमा पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म हुन सक्छन् । त्यस्ता महिलाको उपचारमा समस्यै छ, पैसा र ज्ञानको अभावमा महिलाहरू दुःख लुकाएर बस्छन् ।
अर्की स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.अरुणा कार्कीले स्त्री रोग विशेषज्ञ हुँदैमा सबैले यसको शल्यक्रिया गर्न सक्दैनन् । यो कारणले पनि घादिङकी महिलाले दुःख भोग्नुपरेको हुन सक्ने बताइन् । ‘बिरामीलाई ३–४ सातासम्म राखेर शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ त दुई पटकसम्म पनि शल्यक्रिया गर्नुपर्छ, तर शल्यक्रिया गरे पनि पूर्णरूपमा निको नहुन सक्छ’ उनको भनाइ छ ।
विकसित देशहरूमा यो समस्या एकदमै कम छ । नेपालमा यो समस्याको कारणमध्ये कम उमेरमा विवाह, कुपोषण, सुत्केरी हुँदा जटिलता, गर्भावस्थामा गरिने स्याहारबारे जनचेतना अभाव र स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच नहुँदा जटिल अवस्थाका सुत्केरीलाई समयमा शल्यक्रिया गर्ने सुविधा नहुनु हो ।
स्त्री रोग विज्ञहरूका अनुसार प्रसव व्यथाले मात्र नभई कहिलेकाहीँ त चिकित्सकले शल्यक्रिया वा औजार प्रयोग गरी सुत्केरी गराउँदा दुर्घटनावश फिस्टुला हुन सक्छ । महिलाको योनिमा जटिल संक्रमण वा बलपूर्वक यौन सम्पर्क राख्दा पनि यो समस्या हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार एक हजार महिलामध्ये प्रसव हुँदा तीन जना यो समस्याबाट ग्रसित हुन्छन् । नेपालमा हरेक वर्ष दुई सयदेखि चार सय महिलामा यो समस्या देखापर्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर, यस्तो किसिमको समस्या लिएर उपचार गराउन अस्पताल पुग्ने महिलाहरू कमै छन् । किनभने यसको उपचार हुन्छ भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन ।
प्रायः गरिब र दुर्गम गाउँमा बस्ने महिलाहरू बढी यो समस्याबाट पीडित छन् । उनीहरूलाई सहरको अस्पतालसम्म पुग्दा बस्न र खर्चको अभाव हुन्छ । १० वर्षअघि एउटी महिलालाई पाटन अस्पतालमा यो समस्याको उपचार गराउँदा ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो ।
रामेछापकी ती महिलाको फिस्टुलाको उपचार हुँदा तीन सातासम्म अस्पतालमा बस्नुपरेको थियो । विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाएर त्यो उपचार सफल भएको थियो । तर, त्यति धेरै पैसा गाउँका महिलाले तिर्न सक्दैनन् । हामीले धेरै जनासँग पैसा उठाउनुपरेको थियो । धेरै सुविधा त पाटन अस्पतालमा पनि दिइएको थियो ।
‘कतिपय स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत फिस्टुलाको विषयमा थाहा हुँदैन रहेछ’ डा. अरुणाले स्वास्थ्यकर्मीले भनेको कुरा सुनाएकी थिइन्, ‘मैले त यो फिस्टुला भनेकै सुनेकी थिइन । मेरो स्वास्थ्य चौकी नजिकै बूढी गरिब महिला बस्थिन् । उनको शरीरबाट पिसाब गनाइरहन्थ्यो । सबैले उनलाई फोहोरी महिला भन्थे र म पनि त्यसै भन्थें । तर फिस्टुलाका बारेमा तालिम पाएपछि बल्ल बुझेकी हुँ । उनको दुई वर्षअघि मृत्यु भयो । उनलाई त तपार्इंहरू जस्तो डाक्टरले उपचार गर्न सक्ने पो रहेछ ।’ यसरी व्यथा लुकाएर गरिबीकै कारणले कति महिलाले वेदना खेपेका होलान् ?
लामो व्यथा लागेर फिस्टुला हुने स्थितिसम्म आएका महिलाबाट प्रायः मृत्त बच्चा जन्मिन्छन् । अनि योनिमार्गबाट लगातार पिसाब, दिसा वा दुवै चुहिरहन्छ ।
पिसाब धेरै चुहिने डरले पानी कम खाँदा जलवियोजन तथा मिर्गौलासम्बन्धी समस्या हुनसक्छ । निरन्तर दिसा, पिसाब चुहिने हुँदा लुगा सधैं भिजेर गन्हाउने भई महिलाहरू समाजमा लुकेर बस्छन् । घरपरिवारले अपहेलना गर्छन् । कतिपय महिलाहरू त फिस्टुला हुँदा जंगलमा गएर बस्छन् । सायद यसै कारणले हामीहरू महिला स्वास्थ्य शिविरमा जाँदा यस्तो समस्या भएका महिलाहरू आउँदैनन् ।
धेरै समुदायमा फिस्टुलाबारे जानकारी पनि छैन र नेपालका केही ठाउँमा मात्र सित्तैमा उपचार हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।
सुदूरका गाउँमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई फिस्टुला र पाठेघर खस्ने र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम दिन सकियो र उनीहरूले यस्तो बिरामीलाई उपचार गर्न कहाँ पठाउने भन्ने थाहा भए सहज हुने थियो । फिस्टुला भएकाहरूको जीवन नै बदलिन्थ्यो ।
अहिले मोडेल अस्पतालमा, धरान र सुर्खेतको उपक्षेत्रीय अस्पतालमा यसको निःशुल्क उपचार हुन्छ । तर, थापाथली प्रसूति गृह, भेरी अंचल अस्पताल वा कतिपय मेडिकल कलेजमा अझै यसको उपचार हुन सकेको छैन । सबै ठाउँका स्त्री रोग विशेषज्ञहरूले यसको शल्यक्रिया गर्ने तालिम पनि लिएका हुँदैनन् ।
उपक्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा फिस्टुलाको उपचार गर्न राखिएको विशेष शिविरमा एक महिनामा ८० जना महिला शल्यक्रिया गर्न आएका थिए । उनीहरूलाई गाउँगाउँमा गएर खोजेर ल्याइएको थियो ।
‘सायद कुनाकाप्चामा अझै पनि महिलाहरू समस्या भएर बसेका छन् कि भनेर स्वास्थ्यकर्मी जागरुक भएर खोजी गर्नुपर्छ’ स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.गणेश दंगाल भन्छन् । इथियोपियामा फिस्टुला भएका महिलाको मात्रै उपचार गर्ने विशेष अस्पताल छ । अफ्रिकामा महिलाको ‘योनि छेदन’ गर्ने खराब संस्कृतिले यस्तो समस्या धेरै भएकाले त्यसका लागि विशेष अस्पताल खोलिएको हो । धन्य, नेपालमा त्यस्तो खराब चलन छैन । तर, पाठेघर खस्ने समस्या भएका र फिस्टुला भएका महिलाहरू नेपालमा पनि छन् । उनीहरू उपचारको पर्खाइमा छन् ।
‘खानामा क्यालोरी कम भए इम्युनिटी घट्छ’ जेष्ठ ५, २०७८